इन्द्रजात्रा हेर्न अमेरिका सहित ६ देशका जनप्रतिनिधि नेपाल आउँने !
भदौ २५,२०७६ चितवन ।
यही भदौ २७ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने इन्द्रजात्रा हेर्न अमेरिकादेखि चीनसम्मका ४८ जना जनप्रतिनिधि आउँदैछन् । नेपालको प्राचीन जात्रा र सांस्कृतिक सम्पदा हेर्नका लागि महानगरले ६ देशका जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौं निम्त्याएको बताएको छ ।
सम्पदाप्रेमीहरु भने यस्ता भोजले यहाँको संस्कृति र सम्पदाको प्रवद्र्धन नहुने बताउँछन् । “महानगरपालिकाको यस्तो तयारी यहाँको संस्कृति र सम्पदा प्रवद्र्धनका लागि सहयोगी हुन सक्दैन । पाहुनालाई स्वागत भेट वा बिदाइको आयोजनामा रात्रिभोज दिँदा पनि हुन्छ ।
तर तीनै रात तारे होटलको रात्रिभोजले नेपालको संस्कृति र सम्पदाको परिचय र प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्न सक्दैन,” वसन्तपुरका स्थानीय तथा सम्पदा बचाउ अभियानका एक अभियन्ताले भने, “विदेशी पाहुनालाई तारे होटलमा रात्रिभोजभन्दा बुङ्मती, खोकना, साँखुजस्ता प्राचीन क्षेत्रमा लगेर त्यहाँका स्थानीय परिकार चखाउन सके त्यो निक्कै उपलब्धीपूर्ण काम हुन्थ्यो । अमेरिका र चीनबाट आयातित परिकार त्यहीँका नागरिकलाई पस्किनुमा कुनै मौलिकता छैन ।”
“पहिले राजाका पालामा राजा आफैं इन्द्रजात्रामा सहभागी हुने चलन थियो । अहिले नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी जात्रामा उपस्थित हुने कार्यक्रम छ,” जात्रामा राष्ट्रपतिको उपस्थित विवादित बन्ने अनुमान छ नि? भन्ने प्रश्नमा मेयर शाक्यले प्रतिक्रिया दिए, “पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा पनि भैंसीमा चढ्ने राष्ट्रपति भन्दै केही पक्षबाट विरोध भएको थियो ।
ठूलो कार्यक्रममा केही विरोध पनि होला तर इन्द्रजात्रामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थित रहने छ । यसका लागि सुरक्षा र थप व्यवस्थापनको तयारीका लागि म सबैसँग आग्रह गर्छु ।”